कैलालीको मोहनामा डुल्दै डल्फिन ! - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
कैलालीको मोहनामा डुल्दै डल्फिन !
२६ असार २०७५, मंगलवार ०३:५४
बर्खा लागेपछि मोहनाका सहायक नदी काँडा, पथरैया र कान्द्राको संगममा डल्फिन देखिन थालेको छ ।
ढुंगानाले डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गरिनुपर्ने बताए । यहा पर्यटक सुबिधालाई मध्यनजर गरी होमस्टेको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावना छ। वर्षातमा कर्णालीमा पानीको सतह बढेसँगै मोहना नदी प्रणालीमा डल्फिन देखापर्छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।